China 3030 lattice led strip abavelisi kunye nabathengisi | Huayuemei
I-LED yangaphakathi 6PCS
Amandla 5.4w / iiPC
I-Curtain LED Strip inikezela nge-point-to-point substrate elula yokuxhathisa simahla ukuya kwii-500 lbs zokukhanya okufanelekileyo
IIFUNI ZOKUKHANYA / UKUSETYENZISWA KWE-ENEJI
I-Curtain LED Strip ibonelela ngokukhanya okufanayo, ukunqanda iindawo ezinobushushu. Inkqubo ifuna umbane ophantsi kwaye idle i-60% yamandla amancinci, xa kuthelekiswa nenye inkqubo
IBHODI YENKCUBEKO EYA KWISITHUBA
Ikhethini ye-LED Strip inokulungiswa ngokwenza ukuba ibala libe phakathi kweebhodi ze-LED kuxhomekeke kwizixhobo ezisasazwayo, ukubuyela umva kunye neemfuno zemveliso yokukhanya
AMANYE AMABINI / AMABINI AMAXANDLA
Iibhodi zethu ze-LED zingabodwa-okanye zimbini-macala ngokwahluka kancinci kwiindleko. Ogqibeleleyo isilingi, udonga imvelaphi inyuselwa khona kunye ngeenxa zonke
Ukufuna izixhobo ezimbalwa kwaye akukho bungcali, iCurtain LED Strip inokuxinezeleka ngokulula kwaye yenziwe ngokobungakanani bayo nayiphi na imilo
Kwiigram ezingama-70 ngenyawo lesikwere, i-Curtain LED Strip ayifuni kuqiniswa ngokukodwa
1. I-Curtain LED Strip ifumene i-CE kunye ne-UL eqinisekisiweyo yenkqubo yokukhanyisa i-LED evelisa ukukhanya okufanayo. Ikhethini ye-LED Strip inokukhanyisa ubungakanani be-diffusers kunye nezixhobo zezicelo ezininzi kunye nokudityaniswa koyilo.
Ubushushu 2.Color, CRI, Ubungakanani ungenziwa ngemfuneko ngokwesicelo sakho. Inokuba lunciphiso ngesilawuli.
Ukukhanya okungafaniyo kunye nokudityaniswa kobugcisa kuhamba kunye ne-Curtain LED Strip.
4 .. Samkela i-OEM ne-ODM ngokwesicelo sakho.
Iqondo lobushushu 6.Mbala ungenziwa ngemfuneko isicelo sakho (2800-12000K).
7. Iwaranti yiminyaka emi-3. Lobushushu Working ngu -50 ℃ ~ 50 ℃.
Iiparameter zokukhanya ezinikiweyo ziqinisekisa ukukhanya phezulu. Kuxhomekeka kuhlobo lwezixhobo ezisetyenziselwa oonobumba besitishi okanye ibhokisi yokukhanyisa, iiparameter zinokutshintsha Ukuqaqamba okungaphezulu kufunyenwe ukuba umgama phakathi kweemodyuli ze-LED unciphile.
2. Imodyuli ye-LED ngokunokwayo kunye nawo onke amacandelo ayo ayinakuba luxinzelelo loomatshini.
3. Nceda uqinisekise ukuba umbane unika amandla awaneleyo okwenza umthwalo uwonke. Ngabasebenzi abaqeqeshiweyo kuphela ekufuneka bavunyelwe ukuba benze ufakelo.
4. Uyilo lwezindlu kufuneka lube ngokwemigangatho ye-IP kwisicelo.
5.Ukuba ulwakhiwo lokhuseleko alukho kumboneleli wombane, umkhuseli wombane kufuneka afune ukongezwa.
Egqithileyo IP67 ikhethini ekhokele ukukhanya komtya
Okulandelayo: Ukukhanya okungamanzi kwe-SMD5050 okungamanzi kwibhokisi yokukhanya yelaphu